Ny voan-tsinapy nambolena tonga hazo
Talata 27 ôktôbra 2020 — Herinandro faha-30 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka 13, 18-21 — Raiso amim-pahalemem-panahy ny teny voafafy aminareo, izay mahavonjy ny fanahinareo.
Entanin’ny Evanjely anio isika mba hanana ny fanantenana, na dia eo aza ireo olana sedraintsika eo amin’ny fiainana. Manantena fa tsy mitsaha-miorina ny Fanjakan’Andriamanitra. Tao amin’ny zaridaina nialan’ny Jesoa Kristy aina sy nahafatesany no namafazana izany Fanjakan’Andriamanitra izany, ka tonga hazo lehibe ho antsika rehetra. Azo heverina ho ilay fitiavana napetrak’i Kristy ao am-pon’ny tsirairay ihany koa anefa izany voan-tsinapy izany, ka mila ampitomboina amim-paharetana ao anatintsika tokoa fa maro ny sedra atrehina eo amin’ny fiainana ny finoana mandram-pihaonantsika Aminy indray andro any.
Ahoana àry ny fomba hampitomboantsika io fitiavana io ao anatintsika ? Mila ny fahasoavan’Andriamanitra isika, fa tsy mahavita na inona isika raha tsy miaraka aminy, hoy ihany ny Salamo faha-127. Mila maka tahaka ny fifankatiavana eo amin’i Kristy ny Fiangonana vadiny isika, hoy koa i Masindahy Paoly Apôstôly, tamin’ireo mpivady kristianina tao Efezy. Fitiavana tsy mila tambiny fa vonona ny hahafoy ny ainy aza ; fitiavana mahavita manorina na koa mitarika amin’ny fahamatoran’ny mpivady. Mila fijoroana ho vavolombelona ihany koa izany fitiavana izany mba hanentanana ny manodidina.